Taiwan: Fanadihadiana Manokan’Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Manohitra ny Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Taiwan: Fanadihadiana Manokan'Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Manohitra ny Nokleary	Voadika ny 29 Marsa 2011 11:43 GMT
Zarao: Toby mpamokatra angovo nokleary faha-efatra no an-dalam-panorenana izao any Taiwan, ao amin'ny tanànan'i Gongliao, 40 km monja miala ny tanànan'i Taipei.
Tamin'ny 1988, valo taona taorian'ny nanapahan'ny Taiwan Power Company hevitra voalohany hanangana ny toby mpamokatra angovo nokleary faha-efatra, nanao fihaonana momba ny niafaran'ny fikambanan-dry zareo manohitra ny nokleary ireo mponina ao Gongliao. Tamin'ny 1994, ireo mponina ao Gongliao dia nanao ny fitsapan-kevibahoaka izay azy ireo manokana ka nahitàna fa 96% amin'ireo mponina ao an-toerana no manohitra ny fananganana ilay toby famokarana angovo nokleary.
Alvin Chua (CC BY 2.0).
Na izany aza, tsy niraharaha ireny fomba fijery ireny sy nanafoana tsotra izao ireny feo ireny ny governemanta.
Tamin'ny 1991 [zh], taorian'ny fanorenan-javatra nataon'ireo mpanohitra teo amin'ilay toerana nomanina hisy ilay toby mpamokatra angovo nokleary, dia nanandrana namotika ireo talantàlana natao ho fanoherana ny polisy.
Tamin'ny 3 Oktobra , nisy fifandonana henjana taorian'ny tsy fanajan'ny polisy ny fifanekena teo aloha sy namotehany ny talantalana, ary nidarohany ny filohan'ny fikambanana manohitra ny nokleary. Maty tsy nahy tamin'izany ny polisy iray raha nandona andry ny mpamily fiara iray ka nikipily ny fiarany. Io no nantsoina taty aoriana hoe loza faha 1003. Taorian'ilay loza, ireo mpitantana tao an-toerana dia nanentana ny mpampita vaovao mba hanao izay haharesy tondro-maso ny fikambanana manohitra ny nokleary sy ny mpanohana azy ireo. Io mpamily io, Shun-Yuan Lin (林順源), izay mpirotsaka an-tsitrapo ao anivon'ny fikambanana manohitra ny nokleary dia voampanga sy voaheloka mandra-pahafaty. Fanampin'izany, ny Lehibe mpanatanteraky ny fikambanana, i Ching-Nan Gao (高清南) dia voaheloka hifonja folo taona an-tranomaizina.
Tamin'ny 1999, taorian'ny nankatoavan'ny Filankevitry ny Angovo Ataomika ny fahazoana alàlana hanangana ilay foibe famokarana angovo nokleary faha efatra, tsy nisy filazàna mialoha fa tonga dia nosintonin'ny governemanta daholo ny fahazoan-dàlana manjono ho an'ireo mponina tao Gongliao. Nolavin'ny mponina ny onitra natolotry ny [zh] governemanta sady nandeha nanao hetsi-panoherana io fanapahan-kevitra io tany amin'ny Antenimiera mpanatanteraka tao Yuan ry zareo.
Taorian'ny nandefasan'ny Ministeran'ny Raharaha Ara-toekarena taratasim-bola ho an'ireo fikambanana mpanjono tao an-toerana, naverin'ireo mpanjono tezitra ireo ilay taratasim-bola mitentina NT$ 200 tapitrisa (USD 6.78 tapitrisa). Nifamory teo anoloan'ny Sampan-draharaha mpanao Lalàna tao Yuan ry zareo ary nihiakiaka ny hoe, ‘Avereno izao dieny izao ny zonay hanjono!’ ‘Mangataka izahay, ho an'ny taranakay ho avy, fa tsy ny ho anay ihany, mba hanana hanin-kohanina.’.
Tamin'ny 2000, ireo mafàna fo mpanohitra ny nokleary ireo dia nanangana ireny korisarisa filalaovana ireny taorian'ny nandraisan'ny kandidà avy amin'ny Antoko Demaokratika Liam-pivoarana ny toerany. Nanapa-kevitra ny hampiato ny asa fanorenana ilay foibe faha efatra famokarana hery nokleary ny antoko teo amin'ny fitondrana. Na izany aza, satria ny disadisa politika [zh] teo amin'ny antoko teo amin'ny fitondrana sy ny antoko mpanohitra mbola tsy nilamina velively, ilay ‘fanafoanana’ koa dia nofoanana indray tamin'ny 2001.
Ny toekarena ao Taiwan dia manaraka ny onjan'ny olana ara-bola aziatika tamin'ny 2001. Ny Kuomingtang, ilay antoko maro an'isa ao amin'ny mpanao lalàna ao Yuan, dia nanambara fa ny fampiatoana ny fananganana ilay foibe faha efatra famokarana angovo nokleary dia tompon'antoka amin'ireo olana ara-toekarena. Amin'ny lafiny iray, ny Antoko Demaokratika Liam-pivoarana dia nanamafy fa ireo mponina ao dia tokony nandray andraikitra tamin'ny fampiatoana ilay asa fanorenana ilay foibe famokarana angovo.
Après plus de 20 ans de protestations contre la centrale nucléaire, la construction a repris, en laissant aux habitants de traiter avec leur propre peur, sans espoir [zh].
Taorian'ny 20 taona mahery nanaovana hetsika hanoherana ilay foibe famokarana angovo nokleary, nitohy indray ny asa fanorenana, namela ireo mponina ao an-toerana hiatrika samirery ny ahiahiny tsy misy fanantenana [zh].
Ilay lahiantitra mitorevaka manoloana ny tempoly ao Aodi sady mitazana ny firoson'ny tanora vitsivitsy (avy amin'i NONUKE). Nisento izy, ‘mazava loatra fa matahotra aho hoe ho tena akaiky dia akaikin'ny tranoko no hisy ilay foibe nokleary.’ Na izany aza, efa an-dalam-pahavitàna ilay foibe. Inona moa no azonao atao manoloana ny governemanta?
Ao Japana, misy ihany koa ireo fihetsiketsehana mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana manohitra ilay foibe famokarana angovo nokleary ao. Ireo mponina (latsaky ny 500) ao Iwaishima (祝島) [zh] dia nanohitra foana ny fametrahana foibe nokleary tao an-toerana nandritra ny 28 taona mahery.
Na dia eo amin'ny 65 taona eo aza ny salan-taonan'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo, ireo zokiolona ireo dia tsy nihemotra mihitsy tamin'ny fanoherana nataony ny governemanta mahametran-dry zareo. Hoy ny tenin-dry zareo, ‘Lova napetrak'ireo razambentsika efa an'arivon-taona maro ny ranomasina. Tsy sitrakay ny hahita azy io ho voaloto.’
Ny hatsika natao tain'ny 2010 ho fanoherana ny foibe faha efatra famokarana angovo nokleary, avy amin'i Alvin Chua (CC BY 2.0)
Taorian'ilay horohorontany faran'izay goavana indrindra teo amin'ny tantaran'i Japana nitranga tamin'ity volana ity, nisy ny ahiahy momba ny solika nampiasaina tao amin'ny vondrom-pihary faha-3 tao amin'ny foibe famokarana angovo nokleary tao Fukushima I:
Saika tsy dia hita firy tany anatin'ireo tatitra isankarazany avy amin'ireo fampitam-baovao mahazatra ny momba ny zava-doza mahazo ny foibe nokleary ao Daiichi Fukushima, io dia noho ny fisian'ny taharo ‘mixed-oxide’ (MOX) tena faran'izay mampidi-doza tokoa tany anatin'ny enina isan-jaton'ireo taho mpiteraka angovo tao amin'ny vondrom-pihary Sampana faha-3.
Na izany aza, tsy dia maro ny olona mahalala fa enina volana lasa izay dia nisy vondron'olona tsy nandry saina natsangan'ireo zokiolona Japone (福島老朽原発を考える会) ho an'ny foibe famokarana angovo nokleary tao Fukushima I [jp] ary namakivaky làlana ho any Tokya hanohitra ny Tokyo Electricity Power Company (orinasa mpamokatra herinaratra ao Tokyo) sy ny fampiasàna ny loharanon'angovo MOX.
Natosik'izy ireo lavitra mihitsy izy ity tamin'ny nampiasàna ny angovo antitra hatrany amin'ny folo taona lasa, taminà vondrom-pihary efa manana fahanterana efa ho 34 taona, ary tsy nisy fanazavàna mihitsy nomena ireo mponina tao amin'ilay prefektiora. Inona daholo no dikan'izany?
Hitady ny làlana hanakanana ny fivoahan'ny solika vaky, fanaovana fanadihadiana ny antony mahatonga ny fijotsoan'ny heriny, famahana ireo olana mifandray amin'ny fahafahan'ireo sambo misedra ny horohorontany , sns, ny Tokyo Electric Power Company dia manan-javatra aman-taoniny tsy maintsy atrehany alohan'ny fametrahana ny vondrom-pihary mihodina amin'ny plutonium. Tena zava-mahasorena ny famelàna ny TEPCO hitrandraka ilay vondrom-pihary ahodina amin'ny plutonium
Roodo, mpitoraka bilaogy Summerlake, taorian'ny nahitàny ireo sary[zh] avy amin'ireo hetsika nataon-dry zareo tany Tokyo, dia niteny hoe:
Ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny anarany manokana dia nijoro teny amin'ireo làlana be mpampiasa. Toa hafahafa ny fijery azy teo amin'ny tanàna. Tsy mba nisy mpampita vaovao nihaino azy ireny. Tsy nisy naniry hihaino ny feon'izy ireo iva, nefa tena niloatra avy ao am-po. Ny sarin'ireo mponina avy ao Gongliao mijoro eny an-dàlambe tao an-tanànan'i Taipei dia tena nahatonga ahy halahelo tampoka. Aiza ireo olon-kafa?
Fisaorana: Misaotra an'i Hanako Tokita nanao ny fandikàna Japone-Anglisy.
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 1 andro izayJapanaNiteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila
2 andro izayShinaSiansa-Famisavisana Shinoa Nandrombaka ny Loka Hugo Tantara Foronona Tsara Indrindra
2 andro izayMaleziaNahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin'ny Governemanta
Tohiny » Mikatona ny famoahan-kevitra
Vakio amin'ny teny Português, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Azia AtsinananaJapanaTaiwan (ROC)